Joe Biden oo difaacay go’aanka uu ka qaatay Afghanistan iyo kabixitaanka ciidamada Mareykanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Joe Biden oo difaacay go’aanka uu ka qaatay Afghanistan iyo kabixitaanka ciidamada Mareykanka
Madaxweyne Joe Biden ayaa si adag u difaacay go’aankiisii ​​ahaa in ciidamada Mareykanka laga saaro Afghanistan wuxuuna diiday dhaleeceyn ballaaran oo ku aaddan bixitaankii ciidamada Maraykanka taasoo dhalisay in Daalibaan la wareegay maamulka dalka Afghansitan.
“Waxaan si buuxda u taageersanahay go’aankeyga,” ayuu yiri Biden. “20 sano ka dib waxaan bartay inaan marnaba la gaareeyn waqti ku habboon in laga saaro ciidamada Mareykanka. Taasi waa sababta aan weli halkaas ay ciidamadu u sii joogeen.”
“Runtu waxay tahay: arrintani waxay u dhacday si ka dhakhso badan sidii aan filaynay. Haddaba maxaa dhacay? Hoggaamiyayaashii siyaasadda Afgaanistaan ​​ayaa quustay oo dalka ka cararay. Milateriga Afgaanistaan ​​ayaa is dhiibay, mararka qaarkood iyagoo aan isku dayin inay dagaallamaan,” ayuu yiri Biden.
Biden wuxuu difaaciisa ku daray digniin ku socota hoggaamiyeyaasha Daalibaan oo aan inaan la carqaladayn ka bixitaanka Mareykanka hadii la isku dayana ay la kulmi doonaan awood xoog leh.
Laftagareen oo dhaliilay sida lagu dhisay Aqalka Sare